Style No .: SH-251 အရောင်: မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းပုံ၊ ၂၁၀ ဂဂဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ခလုတ်၊ ရက်ကန်းသား၊ တိပ်ခွေ၊ ပြားချပ်ချပ်မှတ်ချက် - ပန်းထိုးခြင်း + နေရာချထားခြင်းပုံနှိပ်ခြင်း
စတိုင်နံပါတ်: GR-410 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းတစ်လုံးတည်းသောဂျာစီ၊ 200 ဂဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ခလုတ်၊ ယက်တိတ်၊ ပြားနံရိုးမှတ်ချက်များမှတ်ချက် - ပန်းထိုးခြင်း
စတိုင်နံပါတ်: SH-977 အရောင်: ဒုမီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ၁၀၀% polyester ဂျာкарထိုးချုပ်ထည် ၂၈၀ ဂရမ် + ပိုလီကာကပ်၊ ၂၈၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, Drawcord, Nylon zipper အသွင်အပြင် - ရှေ့အိတ်ကပ်ပေါ်တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ဇစ်၊ ရှေ့ဘက်ရှိဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်များကိုဖြတ်တောက်။ ထားပါ။ မှတ်ချက် - ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ဖွင့်ရန်ငွေရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ညာဘက်နောက်ဘက်အိတ်ကပ်
စတိုင်နံပါတ်: SH-975 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ဝင်ရိုးစွန်းသိုးဖြင့်ကပ်ထားသည့် 100% polyester ဂျာкарထိုးထည်, 350g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic, Drawcord, Silicon တံဆိပ်အသွင်အပြင်: တံဆိပ်ခတ်ထားသောတိပ်ခွေများပါသည့်ပြားနှင့်ချုပ်ထားသည်။ fornt ခြေထောက်ဖွင့်ခြင်းမှတ်စုများ - ရှေ့အိတ်ကပ်ပေါ်ရှိအရောင်ခြားနားသောနံရိုး၊ ဘယ်ဘက်အိတ်ကပ်အောက်ရှိဆီလီကွန်တံဆိပ်၊ ညာဘက်နောက်ဘက်ရှိအိတ်ကပ်
စတိုင်နံပါတ်: SH-974 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ဝင်ရိုးစွန်းသိုးမွှေးပါ ၀ င်သော 100% polyester ဂျာкарထိုးထည်, 350g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic, Drawcord, Nylon zipper အသွင်အပြင် - ရှေ့ပိုင်းဖြတ်တွင်အလှဆင်ရန်တံဆိပ်ခတ်သောဇစ်နှင့် & ချုပ်ထားသော panel မှာမှတ်ချက်။ ။ ညာဘက်ကျောမှာအိတ်ကပ်ထည့်ထားပါ
စတိုင်နံပါတ်: SH-529 အရောင်: မီးခိုးရောင်မိုက်မဲလန်းစ်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: 75% polyester 25% ဝါဂွမ်းသိုးမွေး, 280 gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic, Drawcord မှတ်ချက်။ ။ ရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိခြားနားသောအရောင်များကိုဖြတ်။ ချုပ်ထားသည်။ ဒူးမှာ pleats
စတိုင်နံပါတ်: SH-710 အရောင်: မီးခိုးရောင်မိုက်မဲလန်းစ်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: 100% polyester jacquard, 280gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, Drawcord အသွင်အပြင်: ရှေ့၊ နောက်နှင့်ဘေးဘက်ခြမ်းရှိနံရံများကို ဖြတ်၍ ချုပ်ထားသည်။ ရှေ့အိတ်ကပ်ပေါ်ရှိအရောင်မှတ်စုများ - ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြေထောက်ဖွင့်ခြင်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း
စတိုင်နံပါတ်: SH-709 အရောင်: မီးခိုးရောင်မဲရင့်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: 65% polyester ၃၅% ဝါဂွမ်း slub pique၊ နှစ်ဖက်အပေါ်ရောင်ပြန်ထည် patch ကိုမှတ်ချက်: ဘယ်ဘက်ရှေ့ခြေထောက်ဖွင့်လှစ်ပေါ်ဆီလီကွန်တံဆိပ်
စတိုင်နံပါတ်: B300158 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: 94% polyester 6% viscose slub ပြင်သစ် terry, 240gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic, Drawcord မှတ်ချက် - ရော်ဘာပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဘက်နှစ်ဖက်ရှိငွေရောင်ပြန်ဟပ်ထည် patch နှင့်အတူပြားများကိုဖြတ်။ ချုပ်ထားသည်။
စတိုင်နံပါတ် .: B300150 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထားသောပြင်သစ်၊ 240gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic၊ drawcord မှတ်ချက် - ပုံနှိပ်အားလုံး + နေရာချရာဘာပုံနှိပ်၊ လက်ျာဘက်ပြန်ပုံနှိပ်ထားသောအိတ်ကပ်
<< <နောက်သို့ 123